Imiba ephambili yokuphatha umhlaba: Ukunqongophala kwabasebenzi, ukuphuculwa, ukhuseleko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Imiba ephambili yokuphatha umhlaba: Ukunqongophala kwabasebenzi, ukuphuculwa, ukhuseleko
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Imiba ephambili yokuphatha umhlaba: Ukunqongophala kwabasebenzi, ukuphuculwa, ukhuseleko.
Kuya kubakho imiceli mngeni njengoko imisebenzi yokusingatha umhlaba inyuka ukuhlangabezana nemfuno ekhulayo njengoko ukuphuculwa kweshishini lokuhamba ngenqwelomoya kwi-COVID-19 kuqhubela phambili.
Uninzi lwabasebenzi abanobuchule bokuphatha umhlaba balishiyile ishishini kwaye ababuyi.
Izixhobo ezibini eziphambili zabaphathi bomhlaba yi-IATA Ground Operations Manual (IGOM) kunye ne-IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO).
I-Digitalization inokuqhuba ukuphuculwa kwenkqubo eya kubaluleka ekuphuculeni kokubili ukuzinza kunye nemveliso.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) igxile kwimigangatho, idijithali kunye nokujongana nokunqongophala kwezakhono zabasebenzi ukwakha ukomelela kunye nokuqinisekisa ukuzinza kwexesha elide emva kobhubhane kwimisebenzi yokuphatha umhlaba.
“Kuya kubakho imiceli mngeni njengoko imisebenzi yokuphatha inyuka ukuze kuhlangatyezwane nemfuno ekhulayo njengoko ukuphuculwa kweshishini lokuhamba ngenqwelomoya kwi-COVID-19 kuqhubeka. Ukoyisa ukunqongophala kwabasebenzi, ukuqinisekisa ukhuseleko ngokubambelela ngokungqongqo kwimigangatho yehlabathi kunye nokwenziwa kwedijithali kunye nokuphuculwa kwedijithali kuya kubaluleka ekufezekiseni ukuqalisa ngokutsha okunokwehla, utshilo uMonika Mejstrikova, uMlawuli we-IATA wokuSebenza kweGround, ethetha kwi-33rd. IATA INkomfa yokuPhathwa kweGround (IGHC), eyavulwa ngo Prague namhlanje.
Ababoneleli bolawulo oluphantsi bajongene nokunqongophala okukhulu kwezakhono kunye nemingeni yokugcina nokugaya abasebenzi.
“Abasebenzi abaninzi abanezakhono baye balishiya ishishini kwaye ababuyi. Kwaye ukugaya, ukuqeqesha kunye nokuqinisekisa abasebenzi abatsha kungathatha ukuya kwiinyanga ezintandathu. Ke, kubalulekile ukuba sibagcine abasebenzi abakhoyo kwaye sifumane iindlela ezisebenzayo zokukhwela abasebenzi abatsha, ”utshilo uMejstrikova, oveze nenani lezisombululo eziphambili.
Ukugcina abasebenzi abanezakhono, oorhulumente kufuneka babandakanye ababambeli phantsi kwiinkqubo zenkxaso yemivuzo
Ukukhawulezisa iinkqubo zoqeqesho, ukusetyenziswa koqeqesho olusekwe kubuchule, uvavanyo kunye neefomathi zoqeqesho lwe-intanethi kufuneka zandiswe, kwaye iimfuno zoqeqesho zihambelane.
Ukwandisa ukusebenza kakuhle kokusetyenziswa kwabasebenzi, kufuneka kuphuhliswe incwadana yokundwendwela yoqeqesho eya kuthi ibone izakhono ngokufanayo kubo bonke abaphethe umhlaba, iinqwelomoya kunye/okanye nezikhululo zeenqwelo moya.